Amin'ny firy izao? Entity noforonin'olombelona fotsiny? Inona no dikan'ny hoe "tsy manam-potoana aho", mihoatra noho izany ny zavatra hafa manan-danja kokoa amintsika?
Teny nalaina momba ny fotoana
Fanontaniana sy valiny nosaintsainin'ny olona malaza maro nandritra ny taonjato maro. Ary nanangona vitsivitsy tamin'ireto eritreritra ireto ho anao izahay.
Teny nalaina momba ny fotoana - © Dan Race / Adobe Stock
Mizaha amin'ny alàlan'ny fanangonana ireo teny nalaina, fahendrena ary aphorisma tsara indrindra momba ny fotoana:
Ny zava-drehetra dia manana fotoana! Teny izay midika hoe mianatra mamantatra bebe kokoa amin'ny androm-piainany lava kokoa; aorian'izany dia misy fotoana hanginana, hafa holazaina. Johann Wolfgang von Goethe
Ny zava-drehetra dia mamela azy ireo halazo, ny fotoana mahery. Sophocy
Tsy mitodika any amin'ny fanantenan'ny olombelona velively ny fotoana, faingana izy, mikendry fotsiny ny fandehany. Euripides
Ny fiainan'ny olona lehibe dia mampahatsiahy antsika fa afaka miaina ny fiainantsika misandratra isika ary mamela ny dian-tongotra eo amin'ny fasika rehefa manao veloma. Henry Wadsworth Longfellow
Ny iray miandry ny fotoana hiovana, ny iray hafa miatrika izany ary mihetsika. Dante Alighieri
Ny olona dia tsy manana zavatra ambony sy sarobidy kokoa noho ny fotoana. Ludwig van Beethoven
Anjelin'olombelona ny fotoana satria manome antsika ny fotoana hibebahana amin'ny fahotantsika. Arthur anao
Tsy avy any an-danitra ny fotoana mahafinaritra fa isika no mamorona azy; mihidy ao am-pontsika izany. Fyodor Dostoyevsky
Manasitrana ny ratra rehetra ny fotoana. Voltaire
Manasitrana ny fanaintainana sy ny fifanolanana ny fotoana satria miova ny olona: na ny mpandika lalàna na ny mpandika lalàna dia mijanona ho toy ny taloha. Blaise Pascal
Ny fotoana tsy iraisana. William Shakespeare
Mpiara-miasa matanjaka ho an'ny olona miandany amin'ny antony sy ny fandrosoana ny fotoana. Camillo Benso avy amin'i Cavour
Ny fotoana dia toerana foana fotsiny, izay zava-mitranga, eritreritra ary fahatsapana ihany no manome atiny. Wilhelm von Humboldt
Ny fotoana dia miketrona ny handrina madio indrindra, manala endrika ny fahamarinana mahafinaritra amin'ny natiora ary mamela soritry ny fandringanana amin'ny zavatra rehetra. William Shakespeare
Tsy mandalo ny fotoana fa mitondra sy maka ary mihemotra. Mampanan-karena sy manankarena anao izy ireo, tsy amin'ny fahafinaretana marina, fa amin'ny zavatra avo kokoa. Wilhelm von Humboldt
Ny fotoana mandehandeha toy ny vorona indray mandeha dia misokosoko toy ny sokatra amin'ny fotoana hafa - saingy toa tsy nahafinaritra kokoa noho ny hoe tsy fantatrao na mandeha haingana na miadana izy. Ivan Sergeyevich Turgenev
Miova ny fotoana ary miova koa isika. ovid
Sarotra ny fotoana, ka mila mahazaka fifaliana mora foana ny olona. Friedrich Schiller
Ny mpanam-potoana tena tsara dia manao ny zava-drehetra dieny izao fa tsy mandritra ny fotoana fotsiny. Carl Hilty
ny andro iray dia mety ho perla ary tsy misy an-jato. Gottfried Keller
Rotsaky ny ando maraina dia miposaka amin'ny tara-pahazavan'ny masoandro;
Misy ny mpangalatra izay tsy faizin'ny lalàna nefa mangalatra ny zava-tsarobidy indrindra amin'ny olona: ny fotoana. Napoleon
Fotoana andriamanitra malefaka io. Sophocy
Sarotra ny hino ny tsy fitandreman'ny olona amin'ny fotoana. Georg Christoph Lichtenberg
Ho avy ny andro indray andro izay hisy ny zava-drehetra, izay mbola ho avy manjavozavo ankehitriny, izay ny fotoana mihitsy no hitaky ny kaonty momba izay nataontsika nandritra izay taona maro izay. Carl von Ossietzky
Raha tsy nisy ny minitra farany dia tsy hisy ho vita mandrakizay. Mark Twain
Ankafiziko ny fotoana izao, satria takona afenina ny ampitso. Palladas
Manam-potoana aho, satria samy manana ny fotoana raha iriny. Lucius Annaeus Seneca
Raha ny fotoana no sarobidy indrindra amin'ny rehetra, dia ny fandaniam-potoana no fandaniana lehibe indrindra. Benjamin Franklin
Arakaraka ny maha antitra anao, no mihazakazaka haingana kokoa eo amin'ny voditongotra, ny fotoana, ilay antsoina hoe. Wilhelm Busch
Ny vanim-potoana rehetra dia manaiky ny hadisoan'ny teo alohany tahaka ny adala rehetra manaiky ny hadalan'ny hafa, fa tsy ny azy. August Pauly
Isaky ny tsy manana ny tantarany manokana fotsiny fa koa ny fahitany ny tantara teo aloha. Ny lasa dia misy dikany vaovao isaky ny taonjato. Georg Herwegh
Isaky ny misy sphinx izay milentika any anaty hantsana raha vantany vao voavaha ny ankamantatra. Heinrich Heine
Ny vanim-potoana rehetra dia mahita fahamarinana lehibe, fanambarana ankapobeny, izay ahazoana mandresy ny tontolony. Wilhelm Heinrich von Riehl
Tsy misy manimba mihoatra ny lany andro. Michelangelo
Mianara mankasitraka bebe kokoa isan'andro, manome lanja isan'andro. Johann Kaspar Lavater
Ny fotoako, izao no fiainako. Izay omeko adiny iray amin'ny androko dia omeko sombin'ny fiainako. Minna Cauer
Ny olona mandany fotoana sahirana no mimenomenona voalohany noho ny hafohiny. Jean de La Bruyère
Tsia, tsy fohy ny fotoana omena antsika; avelantsika ho very fotsiny ny ankamaroany. Lucius Annaeus Seneca
Tsy misy tompon'andraikitra loatra amin'ny andro taloha ho fahatsiarovana ratsy. Anatole France
Tsy misy zavatra haingana noho ny taona. ovid
Tsy mijanona intsony ny fotoana, faingana ny fotoana
Sanatria, na te hamerina ny famantaranandro ianao, hiverina ny fotoana very ary ny fahasambarana nofinofy. Friedrich Rückert
Makà fotoana isan'andro hipetrahana milamina ary mihaino zavatra. Tandremo ny feon'ny fiainana mihetsiketsika ao anatinao. Buddha
Ny olona no manao tantara. Ny fomba hitrangan'ny lehilahy marina amin'ny fotoana mety dia ho mistery amintsika olombelona foana: ny fotoana mampanan-talenta, nefa tsy mahomby. Heinrich von Treitschke
Raha ampianao ny taona dia fohy ny androm-piainana; fa raha mandinika ny fanovana zavatra ianao dia toa mandrakizay. Pliny ilay tanora kokoa
Ka ny zavatra rehetra dia mikoriana toy ny ony tsy mijanona. Andro aman'alina! Confucius
ary ilay tsy ampiasainao dia mbola tsy niainanao ilay izy. Friedrich Rückert
Rehefa tonga ny fotoana azonao atao, dia tapitra ny fotoana azonao atao. Marie von Ebner-Eschenbach
Raha misy miteny hoe tsy manam-potoana izy dia midika fotsiny hoe: tsy dia ilaina loatra izany. Ohabolana alemanina
Izay mamela azy handeha dia hitondra raozy ho azy. Friedrich Rückert
Izay te hanery fotoana dia hanery ny tenany;
Ny fahatsiarovan-potoana dia toetran'ny olona, ​​mifanohitra amin'ny fahatsiarovan'ny biby ankehitriny. Otto Liebmann
Faly izahay manampy fotoana betsaka kokoa amin'ny fanangonana ireo teny nalaina, fahendrena ary aphooro tsara indrindra momba ny fotoana. Aza misalasala mifandray aminay!